အသက်များစွာကိုကယ်တင်ပေးနေတဲ့ သမီးဆရာဝန်မကြီးအတွက် အမြဲဂုဏ်ယူနေရပြီး သမီးရဲ့အိမ်ထောင်ရေးသာယာဖို့ဆုပေးလိုက်တဲ့ ကျော်သူတို့ဇနီးမောင်နှံ - TGI Daily News
အသက်များစွာကိုကယ်တင်ပေးနေတဲ့ သမီးဆရာဝန်မကြီးအတွက် အမြဲဂုဏ်ယူနေရပြီး သမီးရဲ့အိမ်ထောင်ရေးသာယာဖို့ဆုပေးလိုက်တဲ့ ကျော်သူတို့ဇနီးမောင်နှံ
အခုချိန်မှာ ပရဟိတမင်းသားကြီးအဖြစ် အားလုံးရဲ့လေးစားချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားသူကတော့ ဦးကျော်သူပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ချိန်က အနုပညာလောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကျော်သူက လက်ရှိမှာတော့ ပရဟိတအလုပ်တွေကို အားစိုက်လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျော်သူက ဘုရားတရားလည်းကိုင်းရှိုင်းသလို စိတ်ကိုအေးချမ်းကြည်လင်စွာထားပြီး ကိစ္စတိုင်းကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျော်သူက သူချစ်ရတဲ့ဇနီးချောလေး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်နဲ့ အေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့တော့ အမြဲတမ်းဖုန်းပြောလေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း ကျော်သူနဲ့ ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့ဇနီးမောင်နှံက သူတို့ချစ်ရတဲ့သမီးလေးအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေ တောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကျော်သူက “Happy Birthday!!! သမီး မြင့်မိုရ်ဦးလူသားများ၏ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ကာ အသက်များစွာကို ကယ်တင်နိုင်သည့် သူတော်ကောင်းဆရာဝန်မကြီးဖြစ်ပြီး မိသားစုနှင့် ရိုးမြေကျသည်အထိ ချစ်ခင်စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပေါင်းသင်းနေထိုင်သွားနိုင်ပါစေ။ ဖေဖေကျော်သူ+မေမေရွှေဇီးကွက်” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မေမေရွှေဇီးကွက်ကတော့ “Happy Birthday သမီးလေး Dimple Myint Mo Oo& Happy Anniversary Dicky Zin & Dimple. ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေအားလုံးတစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်စုံပါစေ။ဝိပဿနာဘာဝနာကို လွယ်ကူစွာကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ပြီး ဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို ရရှိနိုင်ပါစေ။ ချစ်တဲ့ဖေဖေကျော်သူနဲ့ မေမေရွှေဇီးကွက်” ဆိုပြီးပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ကျော်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့သမီးချောလေး Dimple တို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source and Photo Credit-Kyaw Thu’s FB Acc & Myint Myint Khin Phe
အသကျမြားစှာကိုကယျတငျပေးနတေဲ့ သမီးဆရာဝနျမကွီးအတှကျ အမွဲဂုဏျယူနရေပွီး သမီးရဲ့အိမျထောငျရေးသာယာဖို့ဆုပေးလိုကျတဲ့ ကြျောသူတို့ဇနီးမောငျနှံ
အခုခြိနျမှာ ပရဟိတမငျးသားကွီးအဖွဈ အားလုံးရဲ့လေးစားခဈြခငျမှုကို ရရှိထားသူကတော့ ဦးကြျောသူပဲ ဖွဈပါတယျ ။ တဈခြိနျက အနုပညာလောကမှာ လြှမျးလြှမျးတောကျ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ ကြျောသူက လကျရှိမှာတော့ ပရဟိတအလုပျတှကေို အားစိုကျလုပျကိုငျနတော ဖွဈပါတယျ ။ ကြျောသူက ဘုရားတရားလညျးကိုငျးရှိုငျးသလို စိတျကိုအေးခမျြးကွညျလငျစှာထားပွီး ကိစ်စတိုငျးကို ပွီးမွောကျအောငျမွငျအောငျ ဆောငျရှကျတတျတဲ့ ခေါငျးဆောငျကောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ ။
ကြျောသူက သူခဈြရတဲ့ဇနီးခြောလေး ဒျေါရှဇေီးကှကျနဲ့ အေးခမျြးစှာနထေိုငျနတောဖွဈပွီး သူ့ရဲ့သားသမီးတှနေဲ့တော့ အမွဲတမျးဖုနျးပွောလရှေိ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ အခုလညျး ကြျောသူနဲ့ ဒျေါရှဇေီးကှကျတို့ဇနီးမောငျနှံက သူတို့ခဈြရတဲ့သမီးလေးအတှကျ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတှေ တောငျးပေးခဲ့ကွပါတယျ။ ကြျောသူက “Happy Birthday!!! သမီး မွငျ့မိုရျဦးလူသားမြား၏ကနျြးမာရေးကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျကာ အသကျမြားစှာကို ကယျတငျနိုငျသညျ့ သူတျောကောငျးဆရာဝနျမကွီးဖွဈပွီး မိသားစုနှငျ့ ရိုးမွကေသြညျအထိ ခဈြခငျစညျးလုံးညီညှတျစှာ ပေါငျးသငျးနထေိုငျသှားနိုငျပါစေ။ ဖဖေကြေျောသူ+မမေရှေဇေီးကှကျ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ ။
မမေရှေဇေီးကှကျကတော့ “Happy Birthday သမီးလေး Dimple Myint Mo Oo& Happy Anniversary Dicky Zin & Dimple. ကိုယျစိတျနှဈဖွာ ကနျြးမာခမျြးသာစှာနဲ့ လိုအငျဆန်ဒတှအေားလုံးတဈလုံးတဈဝတညျး ပွညျ့စုံပါစေ။ဝိပဿနာဘာဝနာကို လှယျကူစှာကငျြ့ကွံအားထုတျနိုငျပွီး ဒီဘဝဒီခန်ဓာနဲ့ မဂျဖိုလျနိဗ်ဗာနျကို ရရှိနိုငျပါစေ။ ခဈြတဲ့ဖဖေကြေျောသူနဲ့ မမေရှေဇေီးကှကျ” ဆိုပွီးပွောထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ ကဲ ကြျောသူတို့ဇနီးမောငျနှံနဲ့သမီးခြောလေး Dimple တို့ရဲ့ပုံရိပျတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော ။
ရတနာတွေဘယ်လိုဝယ်ခဲ့ရသလဲဆိုတာကို သူများတွေမပြောဖူးတဲ့ စကားအဆန်းလေးနဲ့ အပီအပြင်ပြောပြနေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ဗီဒီယို
မင်းသွေးနဲ့ မထင်မှတ်ပဲ ပြောခဲ့တဲ့စကားအချို့က နောက်ဆုံးပြောဖြစ်ခဲ့ကြတာမှန်း ကြိုမသိခဲ့ရဘူးဆိုတဲ့ သားညီ